Qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii Baydhabo oo la gaarsiiyey Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Garoonka diyaaradaha caalamig ah ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa maanta laga soo dejiyay afar qof oo qaba dhaawacyo culus oo ka soo gaaray qarax gaari oo shalay ka dhacay magaalada Bayadhabo ee axrrunta gobolka Baay.
Dowladda Soomaaliya ayaa Muqdisho ka dirtay diyaarad gaar ah, taasoo qaaday dhaawacyadii liidatay ee ku waxyeeloobay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay bartamaha Baydhabo.
Gudoomiyaha gobolka Baay, Cabdi Aadan Hoosow ayaa sheegay in 4 qof oo xaladoodu aad u liidato laga qaaday magaalada Baydhabo, kuwaasi oo uu sheegay in xaaladooda wax looga qaban waayay Isbitaalka Baydhabo.
Cabdi Aadan Hoosow ayaa sheegay tirada guud dadkii ay waxyeelada ka soo gaartay ay kor u dhaafayso 12 qof oo dhimasho ah iyo 20 dhaawac ah.
Afhayeenka xukuumadda Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbaahinta u sheegay in raysul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed uu xiriir la sameeyay maamulka degmada, ayna isla garteen in bukaannada la geeyo magaalada Muqdisho.
Wuxuu xusay in dadka dhaawaca ah ay daryeel caafimaad ka heli doonaan magaalada Muqdisho.
Conditions require cash aid to Somalia: Turkish foreign minister